अरुलाई नैतिकता सिकाउँदै आएका डा. केसीकै जन्ममिति थरीथरीका ! - Everest Dainik - News from Nepal
अरुलाई नैतिकता सिकाउँदै आएका डा. केसीकै जन्ममिति थरीथरीका !
काठमाडौं, फागुन १० ।अरुलाई नैतिकता र सदाचारको पाठ सिकाउँदै आएका डा. गोविन्द केसी आफै जन्ममिति विवादमा तानिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविनको मागसहित आन्दोलनरत केसीका प्रमाणपत्रमा फरक फरक जन्ममिति भेटिएको छ ।
उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक फरक जन्ममितिसहितका त्रुटि देखाउँदै केसीले नैतिकताका आधारमा प्रधानान्यायधीशको राजीनामासमेत माग्दै आएका थिए ।, अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस डा. केसीकाे १५ अाैं अनशन जुम्लामा
ट्याग्स: dr kc